Soonku Waa Cibaado Caafimaad U Leh Qof iyo Jidhkiisa | Hayaan News
Soonku Waa Cibaado Caafimaad U Leh Qof iyo Jidhkiisa
Soonku waa Cibaado ay Diintu ka warantay faa’iidooyinka uu u leeyahay qofka iyo Acmaashiisa, waa nadiifinta ruuxda, sidoo kale waxa uu leeyahay faa’iidooyin waaweyn oo dhinaca jidhka iyo guud ahaan caafimaadkiisa. Nabigeena Muxamed NNKH wuxuu inooga waramay Soonka Iyo Ilaalada Caafimaadka isaga oo yidhi ‘Sooma aad Caafimaadaane’. Hadaba cafimaadka ku duugan Soonka muxuu yahay?
Sida baadhitaano badan lagu helay waxaa soo baxday in soonku xannuuno badan ka daawo yahay,Nebigu SCW wuxuu yidhi”Sooma Waad cafimaadaysaane”,siday culimo badan sheegeen waxyaalo dad badani maanta la caddiban yihiin ayuu soonku daawo ka yahay Nebig SCW wuxuu yidhi”Soonku waa gaashaan”.
soonku waxyaabo badan ayuu gashaan ka yahay sida Xasadka,macaasida iyo dulmiga,haddaba bal aynu eegno waxyaabaha uu daawada ka yahay soonku.
Dhakhtarka reer Maraykan ee la yidhaahdo Kasiis Karil wuxuu kitaabkiisa caanka ah ee la yidhaahdo (Dadku waa kaa aan la garanayn) ku yidhi”Cunto badan oo la cunaa waxay daciifisay hawl wayn oo ahayd in naftu la qabsato ,sida inay waxyar quudato,sidaa darteed waxaan soo jeedin lahaa in dadku soomo si uu ula qabsado gaajada”.
Diktoor Maak Faaduun wuxuu buugiisa uu soonka ka qoray ku yidhi”Qofkastaaba soonka wuu u baahanyahay waayo sunta cuntada kaga hadha jidhka ayaa intay ururto qofka caajis ka dhigta,culaysna wuu dareemaa laakiin hadduu soomo culayskiibaa iska dhima suntiina jidhkay ka baxdaa ilaa uu dareemo qofku caafimaad dhamaystiran,wuxuuna qofku dareemaya awood badan iyo firfircooni dheeraad ah”. Hadaba faa’iidooyinkaa maxaa ka mid ah?
1. Nadiifinta Nafta,
Soonku wuxuu nafta ku ababiyaa,naxariista,sabirka,akhlaaq wanaaga iyo Ilaah ka cabsiga markaasuu qofku dadaalaa Ilaahayna si fiican u caabudaa,
Ilaahay wuxuu yidhi”Duulkii ilaahay rumeeyow waxaa laydunku waajibiyey soonka sida loogu waajibiyey duulkii idinka horeeyey waxaad mudan tihiin inaad cabsi heshaane”.
Nebiguna SCW wuxuu yidhi”Soonku waa gaashaan,haddii midkiin soomo yaanu danbi la iman jahlina ka noqon soonka,haddiiba qof la dagaalamo ama caayo ha yidhaahdo waan soomanahay”.
Waa kalsooni halkii u danbaysay in qofku yidhaahdo ” haddaanan u soomaynayn Ilaahay falkaagaa waan ka falcelin lahaa”
2. Isdhexgalka Bulshada,
Ramadaanta dadku waxay ka siman yihiin faqiir iyo taajirba inay Ilaahay hal mar u wada soomanyihiin hal marna wada afurayaan,taasi waxay dhaxalsiisay dadka inay is dhexgalaan,waxa wada cunaan, wada cibaadaystaan,khayrka u tartamaan.muslimku bishan waxbay wada cunaan waana bisha kaliya ee masaakiinta aadka wax loo siiyo,Nebiga SCW waxaa la waydiiyey sadaqo tee ugu khayr badan? wuxuu yidhi”Sadaqada la baxsho bisha ramadaan”.
3. Maqaarka Jidhka,
Soonku wuxuu ka daawo u yahay xanuunada ku dhaca maqaarka, sida ay sheegayaan badhitaano la sameeyey, soonku wuxuu yareeyaa biyaha dhiigga ku jira taas oo xoogaynaysa iska caabinta maqaarka,waxayna taasi ka hortegaysaa in maqaarku aqbalo xanuunada kala duwan ee ku dhaca.
4. Kor u qaadida difaaca Jirka:
soonka ayaa kor u qaada qaab dhismeedka difaaca jirka, taasoo jirka ka caawinaysa inuu san u nuglaan jeermiska iyo xanuunada. Jirka ayaa awood u hela inuu la dagaalamo waxyaabaha sababa xanuunada sida jeermiska iyo ilma qabatada. Cilmi baaris ayaa cadaynasa in soonku oo sidoo kale ka hortago dhaawaca ama waxyeelada soo gaarta DNA taasoo ka hortag wanaagsan u ah duqoobida. Kor u qaadida difaaca jirka ayaa muhiimad balaaran u leh ladagaalanka caabuqa.
5. Wadna xanuunka,
Soonku wuxuu yareeyaa wadna xanuunka waayo soonku wuxuu yareeyaa xadiga subagga ee ku Jira jidhka, taasina waxay keentaa in uu yaraado kolostoroolku.Haddii subaggu ku bato jidhka wuxuu keenaa inuu xidho xididada dhiigu maro taas oo keenta in wadna xanuun qofka haleelo. Sidaas waxaa sheegay khubaro dhakhaatiir ah oo baadhitaan dheer ka sameeyey sida uu soonku u caawiyo qofka wadna xanuunka qaba.
Soonku wuxuu hoos u dhigaa macaanka,sida dhakhaatiirtu sheegeen soonku wuxuu yareeyaa sonkorta jidhka ku jirta sida saxda ahna wuu ku soo celiyaa waxaana raaxo hela ganaca (Bankariyaaska),laakiin haddii cuntadu ku badato xaddiga insoolka ee ay soo tuurayso ganacu (bankariyaasku) waxay sababaysaa in ganacu (Bankariyaasku) daalo shaqadiisana qaban kari waayo,ka dibna sonkortu iskugu timaado dhiiga taas oo keenta in xanuunka macaanku soo ifbaxo , soonku wuxuu ka caawiyaa qofka in uu gubo dhamaan sonkortii jidhka ku jirtay markuu gaajoodo,sidaas waxaa lagu sheegay badhitaano la sameeyey.
Ramadaantu waxay hoos u dhigtaa miisaanka qofka waxaanad arkaysaa dad badan oo kuleh ramadaantan waxbadan maan lumin oo miisaan ah,,laakiin qofka miisaanka luminayaa maaha qodka seexda markuu soo toosona cuntada cuurta ,ka dibna balwad u fadhiista,qofka miisaanka lumiyaa ama cayilkaba waa qofka sooma bisha ramadaan,akhrista quraanka, iskana yareeya hurdada ,habeenkiina salaatu laylka tukadda.